Neutron စျေး - အွန်လိုင်း NTRN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Neutron (NTRN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Neutron (NTRN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Neutron ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $373 511.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Neutron တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Neutron များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NeutronNTRN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00717NeutronNTRN သို့ ယူရိုEUR€0.00605NeutronNTRN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00545NeutronNTRN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00653NeutronNTRN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0644NeutronNTRN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0451NeutronNTRN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.159NeutronNTRN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0267NeutronNTRN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00953NeutronNTRN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00992NeutronNTRN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.16NeutronNTRN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0556NeutronNTRN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0384NeutronNTRN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.537NeutronNTRN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.21NeutronNTRN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00982NeutronNTRN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0108NeutronNTRN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.223NeutronNTRN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0498NeutronNTRN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.756NeutronNTRN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.5NeutronNTRN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.73NeutronNTRN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.526NeutronNTRN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.199
NeutronNTRN သို့ BitcoinBTC0.0000006 NeutronNTRN သို့ EthereumETH0.00002 NeutronNTRN သို့ LitecoinLTC0.000119 NeutronNTRN သို့ DigitalCashDASH0.00007 NeutronNTRN သို့ MoneroXMR0.00008 NeutronNTRN သို့ NxtNXT0.504 NeutronNTRN သို့ Ethereum ClassicETC0.000996 NeutronNTRN သို့ DogecoinDOGE2.02 NeutronNTRN သို့ ZCashZEC0.00007 NeutronNTRN သို့ BitsharesBTS0.272 NeutronNTRN သို့ DigiByteDGB0.264 NeutronNTRN သို့ RippleXRP0.0233 NeutronNTRN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000241 NeutronNTRN သို့ PeerCoinPPC0.0255 NeutronNTRN သို့ CraigsCoinCRAIG3.18 NeutronNTRN သို့ BitstakeXBS0.298 NeutronNTRN သို့ PayCoinXPY0.122 NeutronNTRN သို့ ProsperCoinPRC0.877 NeutronNTRN သို့ YbCoinYBC0.000004 NeutronNTRN သို့ DarkKushDANK2.24 NeutronNTRN သို့ GiveCoinGIVE15.13 NeutronNTRN သို့ KoboCoinKOBO1.56 NeutronNTRN သို့ DarkTokenDT0.0066 NeutronNTRN သို့ CETUS CoinCETI20.17
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 16:20:01 +0000.